डेनमार्कको चर्चले सशस्त्रलाई दियो पानी छान्ने उपकरण ! - डेनमार्कको चर्चले सशस्त्रलाई दियो पानी छान्ने उपकरण !
डेनमार्कको चर्चले सशस्त्रलाई दियो पानी छान्ने उपकरण !
२०७५, ५ पुष, 09:53:43 AM
काठमाडौं । ईसाई धर्मको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले आयोजित एशिया प्यासिफिक समिटको चर्चा सेलाउन नपाउदै त्यसको प्रभाव मुलुक कै अर्धसैनिक निकाय सशस्त्र प्रहरी बलमा पर्न थालेको छ ।
यूनिफिकेशन नेपालसमेत आबद्ध रहेको तथा ललितपुरमा कार्यालय रहेको डेनमार्कको एक संस्थाबाट सशस्त्र प्रहरीले पानी छान्ने उपकरण सहयोग लिएको हो । त्यो संस्थाले विश्वव्यापी रुपमै हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम लगायतका धर्मप्रति आस्थावान व्यक्तिहरुको धर्म परिवर्तन गराउने तथा इसाई धर्म प्रचार गराउँदै आएको छ । मानवीय सहायताका नाममा नेपालसहित विभिन्न देशमा सक्रिय रहेको डीएनएन अर्थाथ ‘डान चर्च एड’ भन्ने डेनमार्कको संस्था, जसको मूख्य लक्ष नै इसाई धर्मपरिवर्तनको एजेण्डा हो, त्यस संस्थाले उपलव्ध गराएको पानी छान्ने उपकरण सशस्त्र प्रहरीले स्वीकार गरेको हो ।
यसरी विदेशी गैरसरकारी संस्थाबाट यस्ता सहयोग स्वीकार गर्नु गलत भएको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु नै बताउँछन् । मुलुकको अर्धसैनिक सुरक्षा बलले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, त्यो पनि धर्म परिवर्तनको लक्ष्यसहित खोलिएको संस्थाबाट यसरी मनपरी सहायता लिनु आपत्तिजनक मात्रै होइन, धर्मपरिवर्तन गराउने संस्थाको घुसपैठ सुरक्षा निकायमा पुग्नसक्ने जोखिम बढाएको छ ।
नेपालमा डानचर्च नेपालका नाममा यो संस्था सक्रिय रहँदै आएको छ । करिब ७० लाख रुपैयाँ पर्ने पानी शुद्धिकरण उपकरण (वाटर ट्रिटमेन्ट युनिट) डान चर्च नेपालका कर्मचारी पवित्र गुरुङले बुधबार सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी दुर्गा भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । गुरुङसहितको टोलीले यसबारे सशस्त्र प्रहरीलाई तालिमसमेत दिएको थियो । एसएसपी भट्टराई सशस्त्र प्रहरीको विपत् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हुन् । उक्त सहयोग चर्चबाट होईन, डीसीए नामक एनजीओबाट लिईएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता सुरज श्रेष्ठले नेपालबहस डटकमलाई बताए । सो विदेशी संस्थाले भुकम्पको बेला नेपाल ल्याई प्रयोग नगरी राखेकोमा डिजाष्टरको बेला काम लाग्नसक्ने भनि सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ ।
सशस्त्रलाई सरकारले नै पानीछान्ने उपकरण उपलव्ध गराउन सक्नुपर्ने हो । तर यसरी विदेशी गैरसरकारी संस्थाबाट यस्ता सहयोग स्वीकार गर्नु गलत भएको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु नै बताउँछन् । मुलुकको अर्धसैनिक सुरक्षा बलले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, त्यो पनि धर्म परिवर्तनको लक्ष्यसहित खोलिएको संस्थाबाट यसरी मनपरी सहायता लिनु आपत्तिजनक मात्रै होइन, धर्मपरिवर्तन गराउने संस्थाको घुसपैठ सुरक्षा निकायमा पुग्नसक्ने जोखिम बढाएको छ ।
यो संस्थाले विश्वका गरिबहरुका लागि आर्थिक सहायता दिने नाममा धर्म परिवर्ननको एजेण्डालाई पनि फैलाउने गरेको आरोप छ । केहीवर्ष अघि नेपाली सेनाले पनि पानी छान्ने फिल्टर लगायतका उपकरण विदेशी संस्थाबाट स्वीकार गरेकोमा सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
काठमाडौंमा हालै सम्पन्न एशिया प्यासिफिक समिटका कारण अहिले ने क पा भित्रै बबण्डर मच्चिएको छ । प्रधानमन्त्री के पी ओली तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल नै सो पार्टीमा मात्र होइन, जनजनको तारो बनेका छन् । ने क पाको जारी स्थायी कमिटि बैठकमा सो समिट एवं युनिफिकेशन चर्चको मुद्दालाई लिएर गम्भिर बहस भईरहेको बेला सशस्त्र प्रहरीले यस्तो सहयोग लिनुलाई आश्चर्यको रुपमा लिईएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलभित्र बीचमै जागिर छोड्नेले प्रमाणपत्र नपाउने
केएनपी महिला भलिबलको उपाधि एपीएफलाई